Alinyaung – Page 73 – Myanmar News
Valentine dayအကြို လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့စိုးပြည့်သဇင်
February 12, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
“.အိမ်လာပြီးလုပ်ပေးသွားတာ💙💙💙 ချစ်တယ်အားလုံးကို…ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ပေမဲ့ချစ်ပေးတဲ့သူလေးတွေကိုလည်းချစ်တယိ…. အချစ်ခံရတဲ့အတွက်လည်းပျော်တယ်❤️❤️❤️အားလုံးပေးတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ မရိုက်နိုင်တာလေးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်…. တစ်ခုချင်းစီတန်ဖိုးထားပါတယ်နော်”လို့ဆိုပါတယ်။ Sunday Journal Unicode “.အိမျလာပွီးလုပျပေးသှားတာ💙💙💙 ခဈြတယျအားလုံးကို…ကိုယျတိုငျမလာနိုငျပမေဲ့ခဈြပေးတဲ့သူလေးတှကေိုလညျးခဈြတယိ…. အခဈြခံရတဲ့အတှကျလညျးပြျောတယျ❤️❤️❤️အားလုံးပေးတဲ့လကျဆောငျလေးတှကေိုတဈခုခငျြးစီ မရိုကျနိုငျတာလေးတော့ခှငျ့လှတျပေးပါနျော…. တဈခုခငျြးစီတနျဖိုးထားပါတယျနျော”လို့ဆိုပါတယျ။ Sunday Journal
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုး
February 11, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုး နာမည်ကျော် ဟာသအနုပညာရှင် လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုးကတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့လို့ ငွေရေါ်ကြေးရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်း5PLUS သတင်းရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖော်ပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစိန်ရိုးတစ်ယောက် အနုပညာသက်တမ်ရှည် လူရွှင်တော်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် […]
Myanmar Idol မှ အဆိုတော် ယွန်း တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး
Myanmar Idol မှ အဆိုတော် ယွန်း တို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်တွေပါ။
အမြင့်(၁၇)ပေခန့်ရှိတမာပင်တွင်အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) မိတ္ထီလာ ၊​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ ၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္တီလာမြို့နယ်တွင်အမြင့်(၁၇)ပေခန့်ရှိတမာပင်တွင်ညအခိန်အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနယ်မြေခံရဲစခန်းမှသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီ(၉)ရက်ည(၁၀:၁၅)အချိန်ခန့်မြို့မရဲစခန်းတာဝန်မှူးဒုရဲအုပ်တင်မျိုးဆွေမှအောင်ဇေယျာရပ်ကွက်တွင် အမျိးသားတစ်ဦးကျြိုးဆွဲချသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရစခန်းမှူးဒုရဲမှူးကျော်ထင်နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအောင်ဇေယျာရပ်ကွက် ရာအိမ်မှူးဦးမြတ်ကိုဦးကျော်ဌေးတို့နှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးရာအောင်ဇေယျာရပ်ကွက်နယ်မြေ(၇)ရှိအောင်မြေသာစည် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ရထားသံလမ်းကြားအမြင့်(၁၇)ပေခန့်ရှိတမာပင်တွင်အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်နယ်မြေ(၆)နေ(ဘ)ဦးမာဒင်၏သား အသက်(၂၅)နှစ်ရှိဇော်မင်းထွန်းမှာပုဆိုးကွင်းအသုံးပြုလျက်ဦးခေါင်းနှင့်တမာကိုင်း(၁)ပေခြေထောက်နှင့်မြေကြီး(၁၀)ပေခန့်အမြင့်တွင်ကြိုးဆွဲချသေဆုံး နေပြီးပြင်ပဒဏ်ရာမတွေ့ရှိ၍ရန်အောင်မြင်လူမှုကူညီရေးအသင်းအကူညီဖြင့်ရဲစခန်းဆေးစာနှင့်အတူအလောင်းအားပြည်သူဆေးရုံပို့အပ်ကာ ဓမ္မာတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်သိရှိနိုင်ရေးအတွက်မြို့မရဲစခန်းသေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၈)ဖြင့်ရေးဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော် မှတ်ကြီး – ရန်ကုန် (ဖြစ်ရပ်မှန်မှုခင်းသတင်းများ) ￼ Unicode အမွငျ့(၁၇)ပခေနျ့ရှိတမာပငျတှငျအမြိုးသားတဈဦးကွိုးဆှဲခသြဆေုံးမှုဖွဈပှား ရှမေောငျမောငျ(မိတ်တီလာ) မိတ်ထီလာ […]
February 8, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
မိန်းမအပေါ် သစ္စာမရှိသူ၊ ရိုက်နှက်သူ၊ ငွေအသုံးကြမ်းသူ စသည်ဖြင့် မိန်းမဖြစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်သော ယောင်္ကျားတွေရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း သူ့မှာကျွန်မမှ မရှိရင် မဖြစ်ဘူး။ သူက လူတော်ပါ လို့ပတ်ဝန်းကျင်က အမြင်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမြင်မှန်ကို မရချိန်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုပဲ နားချ နားထောင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချစ်ကြောင့်ပါ။ […]
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ စစ်တွေမြို့မှ စီးနင်း လိုက်ပါလာသည့် မြန်မာ့လေကြောင်း XY- AJN လေယာဉ်သည် ကျောက်ဖြူ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိစဉ် ကုန်ပစ္စည်းအချအတင် လုပ်သည့် လေယာဉ်တံခါးဖွင့်မရဘဲ ဖြစ်နေခဲ့သဖြင့် မိနစ် လေးဆယ်ခန့် ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ အမည်မဖော်လိုသူ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် […]
တစ်ရွာလုံးကဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းလို့ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးသွားရတဲ့ လူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်
လွိုင်ကော် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့၌ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့ (၁၄၂၀)အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်ကော်ပြည်သူ့ကြီး၌ ဒဏ်ရာရလူနာတစ်ဦးဆေးရုံတက်ရောက်ကုသလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်မှူး ဒုရဲအုပ်-အောင်ကျော်တင့်မှ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ဆေးရုံတက်နေသော အသက်ခန့်မှန်း ၂၅/၃၀ကြား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေထိုင်သော (ဘ)ဦးမြင့်အောင်၏သားဖြစ်သူ မောင်အောင်မြတ်ချို(သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်)ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။၎င်းလူနာ၏ […]
ကလေးရဲ့ပုံကို တက်တူးထိုးဖို့နေရာချန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်
February 7, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ကွယ်လွန်လို့ မြေမြှုပ်ထားတဲ့ အလောင်းက သြဂုတ်လမှာ သူမသေကြောင်း အကူအညီတောင်းသောအခါ
February 6, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက ကွယ်လွန်လို့ မြေမြှုပ်ထားတဲ့ အလောင်းက သြဂုတ်လမှာ သူမသေကြောင်း အကူအညီတောင်းသောအခါ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လျှောက်လုပ်တတ်တာများတယ်။ တစ်ခုတည်းကို ဇောက်ချလုပ်တယ်ဆိုတာ ရှားတယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ အဲဒါဟာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ပါ။ အခုလည်း ပေ့ခ်ျထောင်ပြီး စာရေးတာ ရေးတဲ့စာတွေက ကဗျာဖြစ်လိုက်၊ သမိုင်းဖြစ်လိုက်၊ […]